Ruushka oo saaxada Soomaaliya kula soo laabtey yabooh naadir ah
Madaxweyne Farmaajo ayaa Arbacadii madaxtooyada ku qaabilay Mikhail Golovanov, safiirka cusub ee Russia | Xuquuqda Sawirka: SH via GO
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Ruushka ayaa tobanaan sano kadib waxay safiir cusub u soo magacaabtey Soomaaliya, oo sanadihii u dambeeyay soo jiidatay indhaha quwadaha caalamka.
Mikhail Golovanov, oo Arbacadii Muqdisho yimid ayaa wuxuu la kulmay madaxweyne Farmaajo, oo uu ku wareejiyey nuqulo kamida waraaqihiisa danjirnimo, ayna yeesheen wadahadalo.
Xafiiska hogaamiyaha dalka leh xeebta ugu dheer Afrika ayaa war-saxaafadeed ku shaaciyey in dhinacyadda ay kawada xaajoodeen xoojinta cilaaqaadka diblumaasiyadeed ee labada dal.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa lagu martiqaadey in uu ka qeybgalo shirka Russia-Africa kaasoo 26-ka bisha October ee sanadkan 2019 ka dhacaya wadanka qabowga badan.
Bayaanka oo nuqul kamid ah uu arkay Garowe Online ayaa lagu xusay in Golovanov oo ku hadlaya afka madaxda waddankiisa uu siiyey Farmaajo yabooh ku aadan codka diidmada qayaxan ee Golaha Ammaanka.
"Safiirka oo ku hadlaya afka madaxweynihiisa, Vladimir Putin wuxuu u balanqaadey Jamhuuriyadda Soomaaliya in ay ka taageeri doonaa wax kasta oo ay uga baahato Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay," ayaa lagu yiri.
Golovanov ayaa ku biiraya safiiro ka socda reer Galbeedka oo dhowaanahanba imaanayey Soomaaliya oo loo arko dalka istaraatiiji ahaan ugu muhiimsan Geeska Afrika.
Ruushka ayaa kamid ah shanta dal ee ku jira Golaha Ammaanka Jamciyadda Qurumaha Ka Dhaxeysa, kuwaasi oo awood u leh in ay diidaan go’aanada golaha hadii ay guud ahaan isku raacan.
Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska iyo Ingiriiska waa wadamada kale ee sida joogtada ah ugu jira golahan, iyadda oo dalalka kale ee xubnaha ka ah si sanad leh loosoo doorto.
Balanqaadkan ayaa ah mid dhif iyo naadir ah, hadii ay jireen horey ma aysan u soo bandhigin Madaxtooyadda wadamo yabooh kan lamid ah siiyey iyadda oo dalka wajahayo loolan aad u adag.
Hardanka ayaa kaga imaanaya Kenya oo ay isku hayaan dacwad dhanka badda ah oo hortaala Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee ICJ, taasi oo bisha September bilaabeyso dhageysiga kiiskan.
Xukuumada Nairobi ayaa horey uga codsatay Qaramada Midoobay in ay soo farogeliso xiisadan taagan, taasi oo qeyb ka ah talaabooyinka ay Kenya cadaadiska u saareyso Soomaaliya si ay wada hadal u ogolaato.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay warar saacadihii lasoo dhaafey ay qortay saxaafada.
Arin aad Madaxweyne uga noqon-kartid Somalia, safiirna uga noqon karin Kenya
Afrika 06.06.2019. 13:13
Kenya oo xirtay Xilldhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Soomaliya 26.06.2018. 11:30
Afrika 04.08.2019. 13:07
Kenya oo 15 qodob kasoo saartey go'aanka ay ugu yeertay safiirkeeda Somalia
Afrika 16.02.2019. 23:20
Madaxweynaha Kenya oo booqasho taariikhi ah ku tagaya dalka Eritrea
Afrika 23.01.2019. 11:57
Ruusha oo Mareykanka iyo Shiinaha kula tartamo maalgashiga Africa 20.10.2019. 12:44
Goorta uu soo baxayo go’aanka deyn cafinta Soomaaliya oo la shaaciyey 20.10.2019. 11:10
FBI-da oo shaacisay cidda amartay shirqoolka lagu dilay Jamal Khashoggi 20.10.2019. 09:25
Ujeedka safarka ra'iisul wasaare Abiy Axmed Cali ee dalka Jabuuti 20.10.2019. 08:15
Puntland oo diidey in Xildhibaanada DFS ay xafiisyo siyaasadeed furtaan 20.10.2019. 00:30
Xiisad ka dhalatay taliye sarre oo lagu khaarijiyey magaalada Muqdisho 19.10.2019. 19:09